Sarimihetsika sarimihetsika majika amin'ny hodi-mason'i Tal Peleg | Famoronana an-tserasera
Efa nitondra imbetsaka tamin'ny mpanakanto makiazy fa amin'ny fahaiza-mamorona sy ny maha-izy azy ireo dia asehon'izy ireo amintsika fa ny vatan'olombelona dia lamba miloko ihany koa hamoahana ny fahatsapana sy ny fihetsem-po. Mpanakanto makiazy ity izay mampiasa ny molony hanodinana ny makiazy tsirairay avy ho zavatra tsy mahazatra, na i De la Ossa izay mitondra antsika amin'ny horohoro amin'ireo seho an-tsehatra ataony amin'ny hosodoko mba hamela antsika saika horohoro.
Tal Pele dia mpanakanto makiazy iray hafa izay manana talenta lehibe ary asehony antsika amin'ity andiany ity izany ampiasao ny eyeliner handokoana sary mihetsika, mozika ary boky amin'ny hodi-masonao. Fomba tsara hanatsarana ny hatsaran'ireo maso ireo ary handinihana ireo tantara kely izay lazaina rehefa mijery azy ireo mivantana.
Manandrana i Peleg ampidiro ny iris sy ny hodi-maso amin'ny sary mba hahazoana valiny farany anaovan'ny singa tsirairay ny asany. Ao amin'ny The Princess and the Frog, Pegel dia mampiasa ny hodi-masony mba hampisehoana ny volon'ny andriambavy, ary ao amin'ny The Princess and the Pea, ny loko maitso an'ny iris dia ampiasaina amin'ny pea goavambe.
Iray daholo andiana sary mihetsika kely mahafinaritra toa ny The Princess Bride, Alice in Wonderland na Frozen ankoatry ny maro hafa. Fomba mahaliana amin'ny fampiasana makiazy amin'ny fomba kanto sy sary indrindra ary izay manakaiky antsika amin'ireo filokana hafa mampidi-doza indraindray izay ampidirintsika ao amin'ireo faritra ireo.
Ianao dia manana ny facebook-nao hanaraka ny asa lehibe amin'ny makiazy an'ity mpanakanto ity ary hahitanao izany asa kely maro be izay ahitanao ireo karazana tantara sy fanehoana an-tsarimihetsika an-tsarimihetsika amin'ny sinema amerikana.
Avelako ianao mpanakanto makiazy iray hafa fa efa nanandrana teto izahay indraindray toa an'i Shonagh Scott bebe kokoa toa an'i Disney, na dia misy rivotra manjombona kokoa aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpanakanto makiazy Tal Peleg dia mamorona seho mahagaga avy amin'ny sarimihetsika sy boky eo amin'ny hodi-masony
Erica Touris Fresco dia hoy izy:
Jereo Melanie Braggio !!
Valiny tamin'i Erica Tourís Fresco